चिरौली ब्रह्मस्थानमा १७ औं अष्टजाम (२४ घण्टे अखण्ड हरिनाम संकीर्तन) सुरु – Swadesh Online
माडी नगरपालिका-२, चिरौली गाउँस्थित ब्रह्मस्थानमा २४ घण्टे अखण्ड हरिनाम संकीर्तन (अष्टजाम) सुरु भएको छ । चिरौली गाउँ समाजको आयोजनामा सोमबार बिहान करीब १० बजेदेखि अष्टजाम सुरु भएको हो । चिरौली गाउँमा हरेक ३-३ बर्षमा अष्टजाम हुँदै आएकोमा यसपटक १७ औं पटक अष्टजाम मनाइरहिएको पुजा व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ ।
पूजा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामकुमार महतोको अध्यक्षतामा एक संक्षिप्त कार्यक्रमबिच अष्टजाम सुरुवात भएको हो । कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिका रुपमा माडीका नगरप्रमुख ठाकुर प्रसाद ढकालले रिबन काटी भजन गाउँदै नाचेर अष्टजाम पूजाको उद्घाटन गर्नुभएको थियो । उद्घाटन कार्यक्रममा माडी नगरपालिका वडा नं. २ का वडाध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद ढकाल, थारु कल्याणकारी सभा क्षेत्र नं. १, माडी चितवनका अध्यक्ष भीम प्रसाद महतो तथा स्थानीय सामाजिक अगुवाहरु दिनकर पौडेल र महेन्द्र महतोको विशेष आतिथ्यता रहेको थियो ।
मुख्यतः थारु समुदायमा प्रचलन रहेको २४ घण्टासम्म निरन्तर अविराम भजन कीर्तन सहितको पूजाआजा र धार्मिक अनुष्ठानलाई अष्टजामका रुपमा चिन्ने गरिएको छ ।